Home AFRIKA CARUURTA FOOTBALL Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Ivory Coast Eric Bailly Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha ee aan la isku qorin
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee difaaca oo si fiican u yaqaan magaca naanaysta "bahalkii". Dabeecadda Ilmaha ee Eric Bailly iyo wargeyska Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xiriirka, iyo xaqiiqooyin kale oo caddayn ah oo caddaynaya (wax yar).
Haa, qof walba waa ogyahay inuu yahay difaac difaac ah. Si kastaba ha noqotee, kaliya qaar ka fiirso Eric Bailly's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Eric Bailly Childhood Story Plus Xogta Warka Xadidan -Nolosha Hore
Bilowgii, magacyadiisa buuxa waa Eric Bertrand Bailly. Eric Bailly isaga oo inta badan loogu yeero wuxuu ku dhashay 12th Abriil 1994 waalidiintiisa; Mr iyo Mrs Bailly (Sawirka hoose) ee Bingerville, Côte d'Ivoire.
Eric Bally wuxuu ku koray qoyskiisa; waalidiinta, walaalaha iyo walaalaha ee Bingerville, oo ah tuugada Legendary Didier Drogba. Tan iyo maalmihii Didier Drogba, Bingerville wuxuu ahaan jirey xaafad halkaas oo xor u ah wiilasha yar yar marka ay kubada cagta ku socoto. Eric Bailly oo ah dhalinyaro da 'yar ayaa laga saaray.
Fikrad ahaan, Eric Bally wuxuu bilaabay inuu ciyaaro kubada cagta markii uu da'diisu ahayd 7 inta uu ku jiro dugsiga hoose. Kadib markii uu waxbarashadiisa asaasiga ahaa (inta lagu guda jiray sanadihii la soo dhaafay), wuxuu noqday maamulaha sanduuqa taleefanka ee Abidjan, caasimada dhaqaalaha ee Ivory Coast.
Maalin kasta ka dib markii ganacsigu xiran yahay, Bailly oo ku kalsoonaa shaqobixiyayaalkiisa ayaa fariisan doona isbeddelka (lacagta) ee telefoonkiisa. Bailly mar soo noqotey;
"Afrika, waxaa jira dad ku nool xaalado badan oo adag oo adag laakiin, haa, sida ilmo aan ku shaqeynayo,"
Bailly wuxuu ku guuleystay tartamadii aadka u yaraa, ka hor inta uusan bilaabmin tijaabooyin kale isagoo rajeynaya inuu rajeynayo inuu riyadiisa aheyd inuu noqdo ciyaaryahan xirfadle ah. Bailly ayaa shaqada uga tagay isagoo dalbaday in uu raaco qandaraaska kubada cagta ee maxaliga ah. Waalidiinta waalidkiis, habka kaliya ee uu u dejiyay wuxuu ahaa saaxiibkiisii, Vanessa Troupah oo u mahadnaqay ganacsigeeda telefoonka. Faahfaahinta sheekada jacaylka waxaa laga helayaa qeybta nolosha ee Eric Bailly.
Eric Bailly Childhood Story Plus Xogta Warka Xadidan - Muujinta Goobta
Sida carruurta kale ee badan Bingerville, Côte d'Ivoire, BQoyska dhabta ah waxay ku koraan riyoodka inay noqdaan kuwa soo socda Didier Drogba. Si kastaba ha ahaatee, qorshihiisa uu noqonayo weeraryahan ayaa ku guul darreystay inuu arko ma aheyn wax dabiici ah isaga. Bailly waxa uu ogaaday inuu mustaqbalkiisu ahaa aag difaac ah ka dib markii uu arkay isagoo isku dayaya inuu joojiyo qof kasta oo ka soo horjeeda kuwaas oo daroogada isaga gudbiya. Wuxuu isla markiiba ka bartay waxbarashada Didier Drogba ilaa Sergio Ramos kii uu mar dambe ka fikirayay sanamkiisa.
Bailly inta lagu jiro bartamihii bartamihii sannadka dhexe ayaa sii waday in uu ciyaaro rajo beeleed oo deg deg ah oo uu ku kasbado nolol wanaagsan oo aan haysan wax fikir ah oo Europe ah. Dabadeedna, wuxuu la tababaray kooxo badan, oo ka soo wareegay hal degmo oo magaalada ka mid ah si uu u raadiyo qandaraas.
Eric Bailly Childhood Story Plus Xogta Warka Xadidan -Kusoo caan bax
Sanadka 2011 wuxuu ahaa mid mucjiso ah Bailly oo fursad u helay inuu ciyaaro kubada cagta tartanka dhalinyarada ee Burkina Faso. Markii uu ku guuleestay tartanka dhalinyarada, wuxuu helay sawirro ay sameeyeen kooxaha Espanyol kuwaas oo doonayay in ay raadsadaan difaacayaal dhalinyaro ah oo Afrika ka yimid.
Bailly oo ahaa 17 oo keliya xilligaas ayaa la kulmay filashooyinkoodii. Waxaa si deg deg ah loogu siiyay RCD Espanyol ee Barcelona halkaas oo uu ku biiray nidaamka dhalinyarada. Dib u dhac ku yimid helitaanka ruqsadda shaqada Bailly ayaa sugaya bilooyin 10 ka hor inta aan loo ogolaan inuu u ciyaaro kooxda B Espanyol ee horyaalka heerka labaad ee Segunda.
Tababaraha Bailly ayaa ku guuleystay abaalmarinta daafacii ugu da'da yaraa ee ka soo kabsaday waqti ka yar tan ka mid ah daafacyada dhexe ee joogtada ah ee afarta kooxood ee ugu sareysa Spain.
Bailly ee cajiib ah wuxuu bilaabmaa inuu boodboodo sida sanamkiisa Sergio Ramos, Diego Godin iyo Gerard Pique. Wakhti ma qaadin ka hor inta uusan noqon a La Liga lynchpin iyo mushkilad difaac ah Lionel Messi.
Intii lagu jiray waqtigiisii ​​Espanyol, Eric Bailly wuxuu noqday bartilmaameedka Derbi Barceloní, a Magaca la siiyay ciyaaraha kubadda cagta ee u dhaxeeya FC Barcelona iyo RCD Espanyol. Ka dib markii 5 la ciyaartay Espanyol, Bailly waxaa iibsaday Villarreal. Waxa uu ahaa naadiga uu ku arkay goolka Special One, Jose Mourinho kaasoo noqday macalinka United.
On 8 June June 2016, Bailly wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee uu saxiixo José Mourinho. Tan iyo markii uu ku biiray kooxda, wuu ku faraxsanaa.
Eric Bailly Childhood Story Plus Xogta Warka Xadidan -Nolosha Xiriirka
In xidhiidh lala yeesho marwalba wuxuu ahaa qayb muhiim ah oo ah nolosha Eric Bailly. Vanessa Troupah (sawirka hoose) wuxuu ahaa jacaylkiisa noloshiisa xaqiiqda laga soo bilaabo maalmaha uu ahaa dhaqaale ahaan curyaanka ah.
Eric Bailly ayaa wakhti dheer oo saaxiibtinimo ah Vanessa Troupah u ciyaaray bishii June 2016, maalmo kadib markii uu dhameystiray qandaraaskiisa afar sanno oo uu ku qaadanayo £ 30 million ee Old Trafford.
Inkasta oo dabeecadda sokeeye iyo hoose ee muhiimka ah ee guurka, suxufiyiin badan oo xiiso badan ayaa awooday inay sheegaan aqoonsiga qarsoodiga ah iyo xaaladda bulsheed ee arooska nasiib u leh ee Bailly.
Warkeeda kaliya ee ku saabsan iyada ayaa ahayd in Vanessa mar uu ka shaqeynayay dukaanka taleefanka gacanta ee waddada wadada halka saaxiibkeen Bailly uu qadariyo qandaraasyada kubada cagta ee maxaliga ah. Isla markiiba arooskoodii kadib, waxaa jirey gossips kuwaas oo ka muuqday erayada soo socda;
Maxaa ka dhacay duni xirfadle ah oo Ingiriisi ah oo xiriir la leh gabadh maxali ah oo udhashay Ivory Coast oo samaysay wax ka yar $ 3 maalinkasta oo ka timid ganacsigeeda telefoonka?
Jawaabta, Vanessa wuxuu sameeyey faallo fudud, isaga oo sheegay in ay hadli doonto marka wakhtigu la joogo. Mrs Bailly ayaa markii dambe furay, waxaana uu shaaca ka qaaday sirta qarsoodiga ah ee ku saabsan xiriirka ay la leedahay Bailly. Waxay tiri;
"Waxaan la kulmay Eric markii aan ku shaqeynayay dukaan telefoonka gacanta ah oo ku yaal Abidjan,"
"Ma aanan la kulmin diyaarad, barkad ama xaflad. Wuxuu i soo kulmay barkaddayda buskudka ah ee aan ku iibin jiray halkaas. Waxa uu ahaa qofna markaas. Waxa uu u isticmaali jiray wicitaanada barkaddayda deyn ahaan.
"Maanta waa ciyaaryahan caalami ah iyo xirfadle. Anigu ma dhahayo inaad haysatid dukaanka taleefanka gacanta si aad ula kulanto ninkaaga mustaqbalka. Waxaan kaliya oo doonayaa in ay tilmaamaan gabdhaha yaryar si ay u helaan wax wax qabad ah, si adag u shaqeeyaan, talo iyo taageero siiyaan naftaada si ay uga caawiso inuu ku guuleysto nolosha. "
Xilliyaddan, Vanessa wuxuu xannaaneeyaa nashqadeeyaha ninkeeda markii aanu lahayn wax lacag ah. Waxay bixisay qiimaha gaadiidka Eric Bailly oo ka yimid iyo ka soo qaybgalay tababarka. Adigu ma aysan haysan wax badan, laakiin waxay ku qasbanayd inay bixiso wax yar oo ay lahayd iyada oo sababtoo ah way jeclayd isaga oo doonaysay inuu ku guuleysto.
Sida wakhtiga qorista, labada isqabaa waxay leeyihiin wiil iyo sida March 6, 2017, xaaskiisa Bailly ee Vanessa ahaa uur.
Eric Bailly Childhood Story Plus Xogta Warka Xadidan -Nafaqada Nafaqada
Eric Bailly waxaa loo yaqaanaa inuu yahay mid gaaban, laakiin waxaan xisaabineynaa Jose Mourinho sida qof aan weligiis saxiixin qofna ma awoodi karo inuu xakameeyo. Hoos waxaa ku xusan aragtida noocaan oo kale ah oo gaaban oo ku saabsan garoonka dhexdiisa.
[arve url = "https://media.giphy.com/media/mXUMUFSr1It2nJXW/giphy.gif" /]
Eric Bailly Childhood Story Plus Xogta Warka Xadidan -Oo ku saabsan kabtiisa
Eric Bailly wuxuu heystaa shaqsiyan qadiimka ah kaas oo uu uga mahad celiyay kabaha caanka ah ee uu ku sawiranyahay qolka dhar xidhka. Waxay ahayd Juan Mata iyo Ashley Young taas oo dunida ka heshay in ay ogaato kabaha uu u leeyahay marka ay ku dhejiyaan Instagram.
Ashley Young oo diiday inay ogaadaan milkiilaha bandhigga ayaa go'aansaday in ay laalaadaan qolka labiska ee dharbaaxada.
Maxaa la socday Eric Bailly's horaantii todobaadkan? Ashley Young oo isku dayay inuu kufaraxo #MUFC https://t.co/h201W6Eeoy
FACT CHECK: Waad ku mahadsantahay akhrinta nooceeda Eric Bailly Childhood Story iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Emmanuel Maarso 28, 2019 saacadu markay tahay 7:34 pm
Waan ku salaamayaa kubada cagta inkastoo midabkayga madow
Zlatan Ibrahimovic Sheekada Sheekada Ilmaha
Romelu Lukaku Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta